Macluumaadka Qashinka Halista ah iyo Adeegyada | Hazardous Waste Management in King County, WA
Ka jawaabidda COVID-19 – Adeegyo badan oo bulshada ayay saameysay COVID-19, oo ay ku jiraan adeegyada aruurinta qashinka halista ah. Aagaga aruurinada qaar waxay la kulmayaan xiritaanada iyo adeegyada qaar si ku meelgaar ah ayaa loo joojiyay. Fadlan ka soo wac 206-296-4692 wixii warbixinta ugu dambeyso. Turjubaanada waxaa lagu heli karaa codsi ahaan.
Macluumaadka Qashinka Halista ah iyo Adeegyada
Haddii aad ku nooshahay ama ka shaqeysid Deegaanka King, waxaan bixinaa iqtiyaarada qashin tuurista ku fillan qashinka halista iyo illaha kugu caawinayo ka illaalinta adiga iyo deegaanka kiimakooyinka halista ah.
Badeecooyinka Halista Caadiga ah
Aanan la isticmaalin, hore, ama badeecada halista aan loo baahneyn waxay noqon kartaa halis la keydinayo. Waxay sidoo kale waxyeeleyn karaan dadka iyo deegaanka haddii lagu tuuro qashinka ama lagu shubo hoosta marinka. Waad aqoonsan kartaa badeecada halista ah adiga oo aqrinayo qoraalada badeecada. Badeecooyinka halista waxay leeyihiin qoraalo oo wataan erayada danger (khatar), poison (sun), warning (digniin), ama caution (feejignaan).
Ugu badbaado badan
Ka hel alaabta summadahan leh xaga hore ama xaga dambe.
Fadlan ogow: Badeecooyinka EPA Safer Choice waa kuwa ugu badbaadsan fasalkooda, xittaa haddii ay dhahdo CAUTION (FEEJIGNAAN) summad ahaan.
Badbaado ku filan
Dooro badeecooyinka oo aanan laheyn erayada CAUTION (FEEJIGNAAN), WARNING (DIGNIIN), DANGER (KHATAR), ama POISON (SUN).
Waxoogaa yara waxyeelo badan
Dooro badeecooyinka leh erayada CAUTION (FEEJIGNAAN) ama WARNING (DIGNIIN).
Waxyeelada ugu badan - ka fogow
Ka fogow badeecooyinka leh erayada DANGER (KHATAR) ama POISON (SUN). Intooda badan waxyeelo ayay kuu yihiin adiga iyo qoyskaaga.
3 Tallaabo oo qashin qub badbaado ah
Usu keen sheeyada:
Haddii qoraalka uu ku jiro ereyada danger (khatar), poison (sun), warning (digniin), ama caution (feejignaan), waa qashinka halista ah.
FIIRI LIISKAAN SHEEYADA AAN OGOLAANO.
Ku hay sheeyada weelkooda asalka ah, summad ku samee alaabta aan la calaamadin, oo adkee sheeyada markaas dhinac uma liicaan ama ma liigaan. Ku kaydi alaabta meel ka fog qaybta rakaabka ka fuulo baabuurkaaga.
Keen sheeyadaada xarunta tuurista. Ma jiro kharash, maadaama adeegga hadda ka hor lagu maalgeliyay biilkaaga nalka iyo biyaha.
Soo hel meel qashinka lagu qubo oo adiga kuu dhow
Axad - Talaado
9:00 subaxnimo - 5:00 galabnimo.
Way xirantahay Luuliyo 4, Maalinta Mahadcelinta, Maalinta Kirismaska iyo Maalinta Sannadka Cusub.
Khamiista - Sabti
9:00 subaxnimo – 5:00 galabnimo
Waxay ku taalaa meesha u dhow boosteejada tareenka.
Talaado - Jamce, Sabti iyo Axad
8 subaxnimo – 4 galabnimo (Tallaadada-Jimcaha), 9 subaxnimo – 5 galabnimo (Sabtida-Axada)
Xarunta warshada waxay ku taalaa saldhiga wareejinta. Way xirantahay Luuliyo , Maalinta Mahadcelinta, Maalinta Kirismaska iyo Maalinta Sannadka Cusub.
Sabti - Axad
10 subaxnimo - 5 galabnimo.
Goobta Auburn Wastemobile waxay furantahay dhammaadyada isbuuca, wareega-sannadka. Baaruudaha lagama ogolaanayo goobtaan.
Goobtaan wey xirantahay Nofeembar 26-27, Diseembar 24-25, iyo Diseembar 31 - Janaayo 1
Wastemobile - Adeegga Aruurinta Qashinka Khatarta ah ee Wareega
Adeegaan aruurinta bilaashka ah wuxuu ku safraa bulshooyinka Deegaanka King ee la xushay iyo waxay siisaa dagayaasha iyo ganacsiyada yar meel ku haboon ee ay geeyaan qashinkooda halista ah.
Wastemobile-ka safra wuxuu shaqeeyaa Maarso ilaa Oktoobar wuuna soo gabagaboobay sanadkaan. Si aad u aragtid liis cusub ee taariikhaha dhacdooyinka, fadlan dib u soo fiiri Feebaraayo.
Barnaamijka Aruurinta Guriga
Miyaad tahay 65 sano ma jir mise ma ka weyn tahay, ama qof naafo ah? Haddii aadan laheyn gaari iyo haddii kale aysan kuu suurtogaleyn inaad gashid aaga aruurinta qashinka halista ah, waxaad noo soo wici kartaa inaad balansatid qaadista qashinka ee gurigaaga. Barnaamijka Aruurinta ee Guriga hadda ka hor waxaa lagu maalgeliyay biilkaaga nalka iyo biyaha, laguguma soo dalaci doono kharash marka alaabta la qaado.
Si aad u balansatid qaadista, soo wac
Isniin - Jimcaha, ka bilow 9 a.m. - 4:30 p.m. (marka laga reebo fasaxyada) Tujubaano waxaa lagu heli karaa codsi
Maku leedahay ganacsiyo Deegaanka King?
Sida ganacsi, waa masuuliyadaada in la maareeyo walxaha halista ah si markaas aysan u waxyeelin shaqaalahaaga, bulshada, ama deegaanka. Waxaanu ka caawin karnaa ganacsiyada u qalma inay ku daadiyaan qashinkooda khatarta ah bilaash. Waxaanu sidoo kale bixinaa adeegyada la tashiga goobta ah, tallooyinka lagu habboonaysiiyay, iyo lacag dib u celinta loogu talo galay horumarka. Dhammaan adeegyadan hadda ka hor waxa lagu maalgeliyay dhexda biilka adeega nalka iyo biyaha.
Si wax badan looga barto oo loo ogaado haddii ganacsigaaga u qalmo, soo wac
Waxa la soo qaadanayo [What to Bring - SQG, Somali]
6-shay oo waxtar leh oo ah agabkaaga nadiifinta badbaadada leh. [Safer Cleaning Recipes, Somali]
Sideen U Iibsan Karaa Alaabta Guriga Oo Badbaado U Ah Qoyskayga? [Safe Shopper's Card, Somali]
Waxa la soo qaadanayo [What to Bring, Somali]
Sanduuqa Nadiifinta Busta Mirirka [Lead Dust Cleaning, Somali]
Ka illaali Gaarista Mirirka Carruurnimada [Prevent Childhood Lead Exposure, Somali]
Qadka Caawinta Qashinka Halista
Dagayaasha iyo ganacsiyada yaryar waxay wacan karaan macluumaadka ku saabsan sida saxda ah ee loo qubo qashinka halista ah, loo isticmaalo alaabooyin suntu ku yar tahay, iyo mawduucyada la xidhiidha.
Isniinta – Jimcaha, ka bilow 9 a.m. illaa 4:30 p.m. (marka laga reebo fasaxyada)
Qadka Caawinta Qashinka Halista ah
* Turjubaanada waxaa lagu heli karaa codsi
Dagayaasha iyo xirfadlayaasha muuqaalka dhulka waxay waci karaan khadka tooska ah ee Beerta si ay u helaan caawimo khabiir oo bilaash ah oo wata su’aalaha beeridda.
Isniinta - Sabtida, ka bilow 9 a.m. illaa 5 p.m. (marka laga reebo fasaxyada)
Bogga (barta khadka)
Barnaamijka Maareynta Qashinka Halista ah wuxuu illaaliyaa oo xoojiyaa caafimaadka bulshada iyo tayada deegaanka ee Deegaanka King iyada oo la yareynayo halista lagu soo rogay soo saarida, isticmaalka, keydka, iyo tuurista walxaha halista ah. Waxaan nahay jaal goboleed oo u adeego dhammaan Deegaanka King oo ay ku jiraan Magaalada Seattle, 37 magaalooyin kale, labo qabiil, iyo aaggaga aan lagu darin magaalooyinka ee weli Deegaanka hoos-imaada.
Iska diiwaangeli aqbaaraheena iyo warbixinta ugu dambeyso ee ku saabsan goorta Wastemobile ay imaanayaan xaafaddaada. Fadlan ogow in warqada aqbaarta ay ahaaneyso af Ingiriis.